Semalt: Nzira Dzakasiyana-siyana Kuti Udzike Zvose Website
Mazuva ano, yakagadzirwa nemaoko kana nekubatsirana kwezvirongwa zvekutsvaga webhu. Dhiyabhorosi kupinza zvishandise kutora uye kutora mapeji ako ekuona, uye wozobudisa dhidhiyo yakasimbiswa pasina kuisa pahutano. Kana iwe uri kutsvaga kuti udzire iwe webhusaiti yose, unofanirwa kushandisa dzimwe nzira uye utarisire yehutano hwehutano - e vape tanks.
Bhuku rinonyora: Nzira yekunyorera:
Nzira yekutanga uye yakakurumbira yekuchera webhusaiti yose ndeyekunyora mabhuku. Iwe unofanirwa kunyoresa nekuisa pasi webhuti yehuwandu hwemunhu uye wohuisa muzvikamu zvakasiyana. Iyi nzira inoshandiswa nevasiri mapurogiramu, webmasters uye freelancers kuwana doro uye kuba zvinhu zvewebhu mumaminitsi mashomanana. Kazhinji, vatengesi vanoshandisa urongwa uhwu uye vanoshandisa mabhodhi akasiyana-siyana kuti aparadze nzvimbo yese kana bhulogi.
DOM kana Document Object Model imwe nzira inoshanda yekuchera webusaiti yose. Inowanzotarisana nemafuta eXML uye inoshandiswa nevanyori vanoda kutsvaga zvakadzama maonero ezveshoko ravo rakarongeka. Iwe unogona kushandisa DOM kune vamwe kuti uwane node dzine mashoko anobatsira. XPath iine DOM ine simba yakasimba iyo inokonzera webhusaiti yose yewe uye inokwanisa kusanganiswa neve-browsers yakazara yewebhu seChrome, Internet Explorer neMozilla. Mawebsite akadzihwa nenzira iyi inofanira kuva nehuwandu hwehuwandu hwezvaunoda.
Vertical aggregation inoshandiswa nemakambani makuru uye makambani eTI. Iyi nzira inoshandiswa kutarisa mamwe mawebsite uye mabhuku uye mari yekukohwa, kuchengeta iyo mugore. Zvisikwa uye kutarisa kwemashoko ezvinyorwa zvakajeka zvinogona kuitwa nenzira iyi inofadza. Saka haufaniri kunetseka pamusoro pehutano hwe data yakatsvaga sezvo inogara yakanakisisa!
XPath kana XML Path Mutauro ndiyo mutauro wekutsvaga unotsvaga data kubva kumabhuku ako eXML uye mawebhusayithi akaoma. Sezvo zvinyorwa zve XML zvakaoma kubata nazvo, XPath ndiyo nzira chete yekubudisa deta uye kuchengetedza unhu hwayo. Iwe unogona kushandisa nzira iyi pamwe chete neDOM parsing uye kubvisa deta kubva kumabloggi uye mawebsite maifambiro.
Unogona kushandisa Google Docs sechinhu chakasimba chekuchera zvinyorwa uye kubvisa demo kubva kumawebsite ose. Iyo inozivikanwa pakati pevashandi uye vanoita webhusaiti. Iyi nzira inobatsira kune avo vari kutsvaga kuti vatsve nzvimbo yose kana mapeji madiki mumasekondi. Iwe unogona kana usasashandisa Data Pattern sarudzo kuti uongorore huwandu hwedeji yako yakatsvaga.
Nhamba Kufananidza Kufananidza:
Iyo nzira inogara ichitaura-inobatanidza iyo inogona kubvisa mawebhusayithi ose muPython nePerl. Iyi nzira inozivikanwa pakati pevadzidzisi uye vanogadzirisa uye inobatsira kunyora mashoko kubva kune dzakaoma mablog uye zvinyorwa zvemashoko.